Nezvedu | Zhejiang Gogogo Mechanical & Magetsi Co, Ltd.
Imwe Chikamu Chikamu Chemagetsi
Matanho matatu eMagetsi Mota
GOST ANP Motokari
IE2 / YE2 mota
IE3 / YE3 Mota
Yb3 Kuputika Zvinoratidza mota
Yakadzika Well Inonyudza Pombi
End kubvisa kubvisa Horizontal Fire Pump
Xbd Moto Pump
Kuzvishingisa Jet Pump
Kuzvipira priming Peripheral Pump
Bhurasho Solar Pump
Dc Brushless Yakadzika Tsime Solar Pump
Stainless Simbi Vertical Inline Centrifugal Pump
Mechanical uye yemagetsi kosi
Yekutanga mota yemagetsi yakagadzirwa muna 1822 naMichael Faraday. Iyo mota yakagadziridzwa gore chete mushure mekunge Hans Christian Ørsted aona kuti kuyerera kwesimba remagetsi kunogadzira yakaenzana magineti shamba. Iyi mota yekutanga yaive ingori tambo yakanyudzwa mukati megirazi remekiyuri ine magineti pazasi. Tambo payakange yakabatana nebhatiri magineti akagadzirwa uye kubatana uku nemagineti yakapihwa nemagineti kwakakonzera kuti waya itenderere.
Makore gumi gare gare jenareta rekutanga remagetsi rakagadzirwa, zvakare naMichael Faraday. Iri jenareta raive nemagineti ichipfuura nepapoiri yetambo uye inokonzeresa yazvino yaiyerwa negalvanometer. Ongororo yaFaraday uye kuyedza kwemagetsi ndiwo musimboti wezhinji zvemazuva ano magetsi echinhu anozivikanwa nhasi.
Kufarira kwema electromechanics akawedzera pamwe nekutsvaga mukutaurirana kure kure. Kuwedzera kwechimbichimbi kweRevolution Revolution mukugadzira kwakapa kudikanwa kwekutaurirana kwemukati menyika, zvichibvumira maelectroniki kuti aite severuzhinji. Kudzoreredza kwakatangira neteregirafu seyemagetsi michina yaishandiswa kugadzirisazve zviratidzo zveteregirafu. Iyo Strowger switch, iyo switch yePaneru, nemidziyo yakafanana yakashandiswa zvakanyanya mukutanga otomatiki kuchinjanisa nhare. Crossbar switch dzakatanga kuiswa zvakanyanya mukati mezana ramakore rechimakumi maviri muSweden, United States, Canada, uye Great Britain, uye izvi zvakakurumidza kupararira kune dzimwe nyika.
（ZHEJIANG GOGOGO Michina & Magetsi CO., LTD, semugadziri ane ruzivo uye mutengesi wemota, pombi dzemvura uye zvimwe zvigadzirwa zvinobva.
Mr.Weed Zeng ndiye muvambi, Akashanda mu matatu danho emagetsi mota,imwechete chikamu capacitor kutanga mota,Centrigugal Pipe pombi yemvura, uye Submersible Tsvina Pump indasitiri kweanopfuura makore makumi maviri, achishandira mazana evatengi uye nekunzwisisa izvo zvinodiwa nevatengi vakasiyana.Zwisisa akasiyana maficha ezvigadzirwa.Mukuita basa, akasangana nevatengi vakasiyana, vamwe vatengi vanongoda chete chigadzirwa. vatengi vanoda akasiyana zvigadzirwa.To kusangana akasiyana akasarudzika zvinodikanwa, isu takatanga kupa akasiyana akasiyana zvigadzirwa.Izvi zvinogona kubatsira vatengi kuchengetedza yakawanda nguva, kutenga mutengo uye kushanda.Zvose zvatakaita zvakagadzirisa zvakanyanya kugutsikana kwevatengi. Uye panguva imwecheteyo, vatengi vakaunza vatengi nekuwedzera kwatiri nekuti vanogutsikana nezvigadzirwa nemasevhisi.
Yedu mhando "GOGOGO MOTORS", "EASTOP MOTOR" inozivikanwa kwazvo mumisika zhinji dziri kusimukira, senge Egypt, Sudan, Iraq, Morocco, Bangladesh, Philippines, Viatnam, Thailand, Ghana, Ethiopia, Srilanka, Poland, Spain, Turkey, Mexico, USA, Costa Rica, Colombia,
Nigeria, Kenya, nezvimwewo kupfuura nyika makumi matatu.
Isu tiri muZeguo mbiri, Wenling inongova maawa matatu chete kubva kuChinese yechipiri chiteshi chengarava-Ningbo port.Tine yedu yepasi yemagetsi mota fekitori, fekitori yepombi yemvura, uye yakakwira presurre yekuchenesa muchina fekitori.Ne yedu yakasimba R & D timu, inogona kupa OEM / ODM / OTM service.we kupa zvigadzirwa zvedu kuITT, ATLAS, CNP, WORDWIDE, nezvimwewo zvakananga kana kuburikidza nevamiriri vedu.we tinotengesa zvigadzirwa zvedu kune anopfuura 200, 000pcs gore rega rega.
Kuti uve nechokwadi chemhando yezvigadzirwa zvedu, isu tine yakasimba yemhando yekudzora sisitimu yeese maitiro kubva kusarudzo yezvinhu zvakasarudzika, zvikamu zvinogadziriswa, zvikamu zvinoungana, kuyedzwa kwese kune packagings.zadzisa chiyero chakakodzera che100%, kugutsikana kwevatengi chiyero che98%.
Kutsigira vatengi vedu uye kuwedzera musika wedu, tinogona kunyorera zvitupa zvakasiyana senge CE, TUV, ETL, UL, COC, SONCAP, COCQ, SAS0, nezvimwe.
Isu tinotarisira nemoyo wese kushanda nevose vatengi vedu kuti tibudirire uye tigovane zvakavanzika zvedu zvebudiriro.
Yakakwira mhando zvigadzirwa, Yakanaka sevhisi, Inonzwisisika mutengo, Inouya panguva
Ichi chombo chemashiripiti chevatengi vese vatsva kuti vave vatengi vedu vekare, uyezve nekuramba tichitsvaga kutsvaga.
Ndapota taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo kana uchida.
GADZIRA LATEST PRICELIST KUBVA US
ZHEJIANG GOGOGO MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD, semugadziri ane ruzivo uye mutengesi wemamota, pombi dzemvura uye zvimwe zvigadzirwa ...
NO.411-412, 1ST BUILDING, JIAKAICHENG, ZEGUO AVENUE, WENLING CITY, ZHEJIANG, CHINA.